घोर अचम्म : राती पेटमा प्लाष्टिक बाँधेर सुत्दा त बिहान पेटनै चैट् – Krazy NepaL
घोर अचम्म : राती पेटमा प्लाष्टिक बाँधेर सुत्दा त बिहान पेटनै चैट्
January 28, 2021 646
एजेन्सी । एउटा यस्तो जीवन उपयोगी टिप्स भनेर सोसल मिडियामा राखिएको कुरा अहिले भाईरल छ । कारण थाहा पाउँदा जो कोही चकित हुनेछन् । सोसल साइटमा कोलिन नामकी महिलाद्वारा सेयर गरिएको फोटो भाइरल भइरहेको छ । यो पोष्टमा कोलीनले दिएको जानकारी अनुसार उनले तीन सन्तानलाई जन्म दिएपछि उनको फिगर नराम्रोसँग बिग्रिएको थियो ।
आफ्नो शरिरलाई फिर्ता पाउनका लागि उनले चमत्कारिक तरिका अपनाए । यो तरिकालाई उनले केही रातका लागि प्रयोग गरिन् र नतिजा देखेर कोलीन निकै खुसी भएको उनले सोसल साइटमा पोष्ट गरेकी छिन् ।
कोलीनको दाबी अनुसार यो तरिकाले निकै सजिलै बढेको पेटलाई कम गर्न सकिन्छ । कोलीनले मार्केटबाट सिविड (समुन्द्री झार) लोशन खरिद गरे । यसका साथै, पेटमा बाँध्नका लागि प्लाष्टिकको आवश्यकता हुन्छ । कोलीनले केही रातका लागि आफ्नो पेटमा सिविड लोशन लगाएपछि प्लाष्टिकले बाँधिन् ।
प्लाष्टिकलाई पेटमा अड्काउनका कोलीनले त्यसमाथि ब्यान्डेज बाँधिन् । त्यसपछि उनी सुतिन् । यस्तो उनले केही रातसम्म दोहोराइन् । यसबाट जुन नतिजा सार्वजनिक भयो, त्यसले उनलाई अचम्ममा पारेको बताइन् । कोलीनको दाबी अनुसार यो तरिकाले हरेक रात उनको एक इन्च पेट कम भयो ।
Prevकपाललाई केहि दिनमै उमार्न मद्धत गर्ने यस्तो छ चमत्कारिक घरेलु उपचार विधि
Nextमनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आज १५ माघ २०७७ बिहिवारको राशिफल पढ्नुहोस्
राम्री युवतीसँग विवाह गर्नुका अचम्मका बेफाइदा, जान्नुहोस्
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45569)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24177)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18668)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17044)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (15120)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (14032)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13119)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (13065)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12975)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12570)